दिल्लीविरुद्ध जितको खोजीमा बैंग्लोर, टिममा पर्लान् सन्दीप ? – Karnalikhabar
११ बैशाख २०७६, बुधबार
दिल्लीविरुद्ध जितको खोजीमा बैंग्लोर, टिममा पर्लान् सन्दीप ?
२४ चैत, काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा आज सन्दीप लामिछानेको टिम दिल्ली क्यापिटल्सले विराट कोहली कप्तान रहेको रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोरसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ।
दिउँसो सवा ४ बजे हुने खेलमा बैंग्लोर छैटौं खेलमा जितको खोजीमा हुनेछ । यसअघिका सबै खेलमा बैंग्लोर पराजित भएको छ । घरेलु मैदानमा दिल्लीलाई पराजित गर्दै पहिलो जित निकाल्ने लक्ष्यमा बेंग्लोर छ । अहिलेसम्म बैंग्लोर अंकविहीन छ ।
यता, दिल्ली पनि बैंग्लोरलाई पराजित गर्दै लिगमा तेस्रो जितको खोजिमा हुनेछ । दिल्लीले खेलको पाँच खेलमध्ये दुई खेलमा जित हात पारेको छ भने तीन खेलमा पराजित भएको छ । दिल्ली अहिले लिगको छैटौं स्थानमा छ । बैंग्लोरलाई पराजित गरे दिल्ली लिगको दोस्रो स्थानसम्म उक्लिन सक्छ । तर निकै गाह्रो छ ।
लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको चेन्नाई सुपर किंग्सको ८ अंक छ । तर बाँकी चार टिम सनराइजर्स हैदरावाद, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुम्बई इन्डियन्स र किंग्स इलाभेन पञ्जाबको समान ६-६ अंक छ ।
दिल्लीको भने चार अंक छ । दिल्लीले बैंग्लोरलाई फराकिलो अन्तरले पराजित गरे लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिने छ भने कम अन्तरले पराजित गरेको खण्डमा पनि दिल्लीलाई तेस्रो स्थानसम्म पुग्ने मौका छ ।
खेल्न पाउलान् सन्दीपले ?
पछिल्लो तीन खेलमा लगातार खेल्न पाएका सन्दीप लामिछानेले बैंग्लोरविरुद्ध प्लेइङ इलाभेनमा पर्न सक्लान् ? त्यो केही घण्टाभित्र थाहा हुनेछ ।
तर पछिल्लो समयमा सन्दीपले आफूले पाएको अवसरलाई सही सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । यद्यपि उनले अहिलेसम्म तीन खेलबाट चार विकेट भने लिइसकेका छन् ।
सन्दीप टिममा परेपछि दुई खेलमा दिल्लीले हार व्यहोरेको छ भने एक खेलमा मात्रै जित हात पारेको छ । पछिल्लो दुई खेलमा चर्चित स्पिनर अमित मिश्र बेन्चमै छन् । उनी सन्दीपको स्थानमा पनि मैदानमा आउन सक्ने अनुमान लगाइएको छ ।
टिममा पर्नका लागि सन्दीपले उनीसँग मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने अवस्था होइन । अन्य सात जना विदेशी खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै टिममा पर्नु पर्ने हुन्छ ।
यस्तो छ सम्भावित प्लेइङ इलाभेन–
पृथ्वी शा, शिखर धवन, श्रेयस ऐयर (कप्तान), कोलिन इनग्राम, रिशव पन्त, क्रिस मोरिस, अक्षर पटेल, कागिसो रबडा, राहुल टेवाटिया, इशान्त शर्मा र सन्दीप लामिछाने ।
पार्थिव पटेल, विराट कोहली (कप्तान), एबी डिभिलियर्स, मार्कुस स्टोइनिस, मोइन अली, अक्षदीप नाथ, युजविन्द्र चाहल, पवन नेगी, नवदीप साइनी, मोहम्मद सिराज र टिम साउथी ।
अघिल्लो - ‘खेतीयोग्य जमिनको खण्डिकरण र प्लटिङ गर्दै जाने हो भने कृषिको विकास हुँदैन, बरु जग्गा कारोबारी मात्रै मोटाउँछन् मन्त्रीज्यू’
प्रधानमन्त्री नै संघीयताको पक्षमा छैनन्ः बाबुराम - पछिल्लो
‘खेतीयोग्य जमिनको खण्डिकरण र प्लटिङ गर्दै जाने हो भने कृषिको विकास हुँदैन, बरु जग्गा कारोबारी मात्रै मोटाउँछन् मन्त्रीज्यू’
प्रधानमन्त्री नै संघीयताको पक्षमा छैनन्ः बाबुराम
बझाङमा बन्न लागेको अनाथ बालगृहका लागि राजेश हमालले दिए एक लाख सहयोग, सहयोगी मनलाई फेरी पनि धन्यवाद
नेपाली राजनीतिमा परिवारवाद : कम्युनिष्टदेखि काँग्रेससम्म, छोरादेखि नातीसम्म
नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा आँधी आउने भारतीय मन्त्रालयकाे दाबी, सचेत रहन आग्रह